Ukusetyenziswa kweefoto kwi-iOS 15 kuya kusazisa ukuba yeyiphi na imifanekiso eza nayo | IPhone iindaba
Ukusetyenziswa kweefoto kwi-iOS 15 kuya kusazisa ukuba yeyiphi na imifanekiso eza nayo
UIgnacio Sala | 14/06/2021 18:00 | iOS 15
Njengoko iintsuku zihamba, bafumanisa Iimpawu ezintsha ezingabhengezwanga nguApple eWWDC 2021Imisebenzi, nangona iyinyani ayiniki mdla kuluntu ngokubanzi, ukuba inokuba yeyabasebenzisi abathile. Omnye wale misebenzi inomdla ufumaneka kwisicelo seZithombe.
Ukusetyenziswa kweefoto nge-iOS 15, kuyasivumela fikelela kwidatha ye-EXIF yemifanekiso Esikugcinileyo kwisixhobo sethu kunye nolwazi oluvela apho ukubanjwa kwenziwe khona (ukuba kubandakanya idatha ye-GPS) kunye nenye idatha. Ukongeza, ikwasivumela ukuba sazi ukuba bafikelele njani kwi-reel yethu.
Ngokuqinisekileyo ngaphezulu kwesihlandlo esinye, xa ujonga i-albhamu yakho yeefoto, uyazibuza ukuba ezinye iifoto okanye iividiyo zifike njani apho. Nge-iOS 15, ungayazi ngokukhawuleza kwaye ngokulula imvelaphi yale mifanekiso.
Njengoko sinokubona kumfanekiso ongentla, phakathi kwemethadatha ethi iApple isinike zonke iifoto esizigcinayo, imvelaphi yazo ikwaboniswa. Kwimeko yomfanekiso ongentla, sinokubona indlela eUmthombo walo mfanekiso sisicelo seSafari.
Xa ucofa kwi-Safari, usetyenziso izakubonisa yonke imifanekiso evela kumthombo omnye. Ndiyathemba ukuba lo msebenzi uyayiqonda yonke imifanekiso kunye neevidiyo ezigcinwe kwisixhobo sethu kwaye zivela kuWhatsApp.
Umsebenzi ongathandabuzekiyo oya kuthakazelelwa ngabo bonke abasebenzisi abangakhange baseke ifayile ye- ukugcinwa ngesandla kwemifanekiso kunye neevidiyo ngaphakathi kokukhetha kwesi sicelo sokuthumela imiyalezo, njengoko iya kukuvumela ukuba uzicime zonke kunye kwaye ukhulule isixa esikhulu sendawo.
Okwangoku i-iOS 15 ifumaneka kuphela kubaphuhlisi. Ayizukude ibe nguJulayi, njengoko iqinisekisiwe yiApple, xa i-beta yokuqala iphehlelelwa bonke abo basebenzisi abayinxalenye ye- Inkqubo ka-Apple yoluntu ye-beta.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iOS » iOS 15 » Ukusetyenziswa kweefoto kwi-iOS 15 kuya kusazisa ukuba yeyiphi na imifanekiso eza nayo
I-Apple ikhupha i-betas yesithathu ye-iOS 14.7, iwotsOS 7.6 kunye neMacOS 11.5
Umdlalo omtsha okhoyo kwiApple Arcade: Iintsomi zoBukumkani